Thwebula FBReader 0.12.10 – Windows – Vessoft
FBReader – a software ukufunda izincwadi electronic and amafayela kusuka archive in takhiwo ehlukahlukene. FBReader ubonisa izithombe nezixhumanisi embhalweni, kugcina isikhundla samanje embhalweni, ungiphenyela ngokuzenzakalelayo, zooms imibhalo umbhalo njll Isofthiwe ikuvumela ukuba wengeze amafayela umtapo wakho siqu ncwadi futhi ehlukana kubo abalobi ezahlukene noma izinhlobo. FBReader iqukethe amathuluzi oyifisayo amafonti, indents, ngezikhathi nezinye izilungiselelo umbhalo. FBReader ibusa okungenani system imithombo futhi evelelwa okulula ukuyisebenzisa interface.
Ukusekela for the tinhlobo letehlukene imibhalo umbhalo
Ukufunda imibhalo evela ezinqolobaneni
Display of the links nezithombe in the text
Ukudalwa umtapo ncwadi
Ukucushwa kwe izilungiselelo umbhalo
Amazwana on FBReader:
FBReader Ahlobene software:
Abafundi E-book Isofthiwe ukufunda e-izincwadi ezivela service Amazon. Futhi isofthiwe synchronizes ngokuzenzakalelayo wonke amasethingi phakathi e-izincwadi kanye computer.
English, Français, Deutsch, 中文... PhotoFiltre 10.11